Uwe ọgwụ, akwa akwa, akwa akwa ọrụ - qiangwei
Uwe akwa ịwa ahụ
Uwe dị n'èzí
Uwe Ngosipụta Anyanwụ
Ejiji ndị ọrụ
Uwe omenala ndị ọzọ
Hangzhou Qiangwei Akwa Co., Ltd. dị na Hangzhou mara mma, Zhejiang. E hiwere ya na 1997 ya na ndebanye aha nke nde yuan 110. Enwere ihe karịrị narị akụrụngwa 600, a kwadebere ya na ngwa akwa mbubata dabara adaba (dịka: igwe ịkwa akwa dị elu, igwe mkpuchi, mkpa ọkụ eletrik America, wdg). Ugbu a, ọ zụlitela ka ọ bụrụ ọkachamara na -emepụta akwa na -ejikọta imewe, mmepụta na ire ahịa. Ụlọ ọrụ ahụ nwere ihe karịrị ndị ọrụ 600, mpaghara ihe owuwu nke square mita 10,000, na ikike imepụta kwa afọ nke nde 1.2. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ahụ nwekwara ụlọ nrụpụta ihe na ụlọ ọrụ na-enweghị uwe.
China aghọọla onye na -emepụta akwa na onye na -ebupu akwa n'ụwa
Kemgbe China batara na WTO, akwa na akwa abụrụla akụkụ dị mkpa na mbupụ China. N'ime afọ iri gara aga, site na iji nwayọọ nwayọọ kagbuo usoro oke nke mbupụ, uwe China, akwa akwa na mbupụ uwe nwere gburugburu mpụga. Favora ...
Nyocha gbasara ọnọdụ mbubata na mbupụ nke ụlọ ọrụ akwa China na 2020
Dị ka nnukwu mba na -ebupu uwe, ego mbupụ uwe China kwa afọ karịrị ijeri dọla 100, nke karịrị nnukwu mbubata uwe. Agbanyeghị, site na mgbanwe nke usoro akụ na ụba China n'afọ ndị na -adịbeghị anya, ụlọ ọrụ akwa ejirila nwayọọ nwayọọ zụta n'ime ...
China bụ nnukwu onye na -ebupu uwe, mana nzụkọ ahịa ya na -ebelata
Dị ka onye na -ebubata uwe, China na -ebupu ihe karịrị $ 100 ijeri uwe kwa afọ, karịa nke mbubata ya. Agbanyeghị, site na mgbanwe nke usoro akụ na ụba China n'afọ ndị na -adịbeghị anya, ụlọ ọrụ akwa ejirila nwayọọ nwayọọ banye n'ọkwa tozuru oke, na ụdị ngwaahịa nwere gr ...
Ekwentị ： 0086-13868068082
Adreesị ： Da 'obodo, okporo ụzọ Chongxian, mpaghara Yuhang, Hangzhou, China